Iwo Masimba Makuru Ekutungamira Ekukora Martech Zone
Chipiri, Gunyana 3, 2013 China, Gumiguru 31, 2013 Jenn Lisak Golding
Isu takave neiyi infographic mumabasa kwechinguva, uye isu tiri kunyatsofara nezve mufananidzo uye nezviri mukati. Kutenda kubatana pamwe nechikwata chedu pa DK New Media, kwedu kushambadzira otomatiki software vanotsigira kuRight On Interactive (ROI), uye tarenda rinoshamisa raRyan Howe pa Henchmen Comic, tinofara kuzivisa Iwo Masimba Makuru Ekutungamira Ekukora.
Kutungamira kunyorera haisi chinhu chitsva, asi ROI ine maonero akasiyana kana zvasvika pakutungamira kurova. Mumaziso avo, 3D kurova ndicho chinhu chikuru chinotevera, chinova chiwedzero chechinotungamira kurova uye kusimudzira izvozvi. Izvi ndizvo zvazvinoita:
Mbiri Kuverenga + Engagement Scoring + Lifecycle Stage = 3D Kukora
Iyi infographic inodonha mune yega yega yezvikamu zveiyo 3D kudhizaini uye kuti ichapa sei nemaonero akajeka ezvinonzi 3D zvibodzwa. Uri kurongera sei vatengi vako netarisiro izvozvi? Izvo zvakasiyana sei nemuenzaniso uyu?
Kana iwe uchitsvaga rumwe ruzivo, tarisa yavo yazvino vhidhiyo pa kushambadzira otomatiki uye kutungamira kusimudzira. Uye nakirwa nemasimba makuru ekutungamira zvibodzwa!
Tags: mutengi lifecycle kushambadziralead alamaHupenyu hwekushambadziramatanho ehupenyumarketing automationprofile kurovakurudyi pane kudyidzana
Yotpo: Sanganisa Zvemagariro Ongororo pane Yako Ecommerce Saiti
Sep 3, 2013 na5: 21 PM
Yay! Ida iyi infographic! Basa rakanaka